Posted by အောင်မြေ at 8:52 PM
မိဂဒါဝုန် အကြောင်းဖတ်သွားပါတယ် မသိတာတွေကို ရှာဖွေတင်ပြပေးတာကျေးဇူးပါအမ
အစ်မရေ... တကူးတကလာလည်တာ မဟုတ်ပါဘူး... နေ့တိုင်းနီးပါး အစ်မ blog ကို ရောက်တာပါ... ဗဟုသုတာတွေ အများကြီးရလို့ ခဏခဏလာဖတ်ပါတယ်... အခုလဲ မသိတာတွေ ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်... ဓမ္မဒါနအလှူအကျိုးကြောင့် အစ်မ ကုသိုလ်တွေ အများကြီးရမှာပါ... အမြဲအားပေးနေပါ့မယ်...
I read your excellent post. Thanksalot Ma Su Yi. Keep going with your delightful job.
အလွန်ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးပါ ...
ရှားပါး တန်ဘိုးရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ တရားဓမ္မတွေကို မျှဝေတဲ့အတွက် ... များစွာ ပီတိ ဖြစ်ရပါတယ်
.... မိဂဒါဝုန် ... ဆောင်းပါးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ....
ဒုတိယ စာပုဒ်မှာ ပါတဲ့ ......... “ လုမ္ဗိနီနှင့် (၃၁၂) ကီလိုမီတာ၊ သာဝတ္ထိပြည်နှင့် (၃၃) ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည်။ .....” ဆိုတာတွေ မှားနေပါတယ် ခင်ဗျာ ....
သာဝတ္ထိနှင့် ဗာရာဏသီ .. (၃၇၅) ကီလို မီတာခန့် ဝေးပါသည် ..... လုမ္ဗနီ နဲ့ကတော့ လမ်းကြောင်း ကွဲနေသည့်အတွက် ... အတိအကျတော့ မပြောနိုင်ပါ ...
ံဒေသခံများ သိပါတယ် ...
နောက် တတိယပုဒ် ..... “ ဗာရာဏသီကို ဗဟိုထား၍ အရှေ့ဘက်ရှိ ဗုဒ္ဓဂယာ၊ ရာဇဂြိဟ်၊ နာလန္ဒ နှင့် ပတ္တနားမြို့များသို့ သွားနိုင်သည်။ တဖန် အနောက်ဘက် ကုသိနာရုံ၊ သာဝတ္ထိ၊ လုမ္ဗနီ ဌာနများသို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်နိုင်သည်။ .... ”
အရပ်ဒေသ ညွှန်းတာလေးတွေလဲ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနေပါသည်။ ....
မြေပုံကို ကြည့်ပါက မြင်နိုင်ပါသည် ......
တစ်ခု အကြံပေးလိုသည်မှာ ...... သမိုင်းကြောင်း .... နေရာ ဒေသ အကြောင်း အထူးသဖြင့် ဘာသာရေး ... အကြောင်းများရေးသားပါက ...... ဆက်စပ်ရာ စာပေများကို လေ့လာမှတ်သား ရေးပါက ... ပိုပြီး အကျိုးရှိစေပါတယ် ....
(အပြစ်ပြောသည်ဟု မမှတ်ယူစေလို့ပါ ....
စေတနာဖြင့် ထောက်ပြ ရခြင်းပါ .. )
ခုရေးတာ ဘုန်းဘုန်းတစ်ပါးပါ ... အိန္ဒိယမှာ နေတာ နှစ်အတန်ကြာ ရှိပါပြီ)
ဆက်လက် ကြိုးစားစေချင်ပါတယ် ...